राजधानी कि 'लाजधानी': धूलो खुवाएर जनतालाई कहिलेसम्म बिरामी पारिराख्ने सरकार ? [भिडियो]
देशको राजधानी काठमाडौंको दृश्य हो यो, जहाँ हरेक दिन हजारौं गाडीको ओहोरदोहोर गर्छन् । देशको कुना कन्दराबाट दैनिकजसो गाडी भित्रिरहन्छन् र एकोहोरो हजारौं गाडी कुदिरहन्छन।
यति धेरै गाडी कुद्नुपर्ने राजधानी जस्तो ठाउँका सडक भने खाल्डखुल्डी र धूलैधूलोले भरिएको देखिन्छ। काठमाडौंको कुनै एउटा चोकमा मास्क नलगाइकन एकछिन उभिनुभयो भने श्वास फेर्न नसकिने गरी धूलोको मुस्लो आउने गर्दछ । झन् सडक चौडा गर्ने भनेर खनेको सडक त बन्ने कहिले हो कहिले । त्यही खनेर छाडेको धूलोले सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् ।
भिडियोमा देखाइएको दृश्य कुनै खानी क्षेत्रको होइन, राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एक घनाबस्ती हो । ललितपुरको सातदोबाटो–गोदावरी सडक खण्डको हरिसिद्धि क्षेत्रको मूल सडकमा उडेको धूलोमा निसास्सिएका नागरिक हुन् । आम नागरिकप्रति राज्य संयन्त्र कति क्रुर बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो । बिदुर लामिछाने जो हरिसिद्धि क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि किराना पसल चलाएर बस्छन्, तर विडम्बना जहिलेबाट उनले पसल चलाउन थाले त्यही दिनबाट यो सडकलाई चौडा पार्ने भनेर डोजर चलाइयो । आजसम्म पनि यस सडकका आसपास व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नेले पिच कहिले हुने भनी कुरिरहेका छन् ।
हरिसिद्धि मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडकको दुर्दशा यस्तै छ । कोटेश्वरमा मुख्य सडकको दाँयाबाँया सडक विस्तार गर्ने भनेर खनिएको बाटो अहिलेसम्म पिच हुन सकेको छैन, जसका कारण त्यहाँ हिँड्ने बटुवा, सर्वसाधारण र फूटपाथे व्यापारीले दैनिक जसो धूलो खाइरहेका छन् । त्यस्तै भैँसेपाटी जाने सडकको हालत पनि उस्तै छ, जहाँ बर्खामा हिलो र हिउँदमा धूलोले हिँडिसाध्ये हुँदैन ।
सडक विस्तार र मर्मतको काम समयमा नगर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गरेर सरकारले नागरिकलाई धूलो खुवाइरहेको छ । यही हो राजधानी शहर ? यसमा सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । देशको राजधानीलाई ‘ग्यास च्याम्बर’ बनाउने दोषी को हो ? किन दोषीमाथि कारवाही हुँदैन सरकार ? किन सडक चाँढो बनाइँदैन ? कहिलेसम्म जनतालाई धूलो खुवाइरहने सरकार ?
हेर्नुहोस्, भिडियो रिपोर्ट :